टिप्पणी Archives - Arthikbazar.com
शेखर गोल्छाले भने नेपालको अर्थतन्त्रलाई मजवुत वनाउने उपाए
अघिल्लो वर्षको रेकर्डमा पनि उद्योगहरु धेरै स्थापना भएका छन् । हामी धेरै परनीर्भर भएका थियौं । अव विस्तारै आत्मनिर्भर हुँदै छांै । अझै धेरै गर्न बाकी नै छ । पुरानो चुनौती सकिएका छन् । नयाँ चुनौती आएका छन् । चुनौतीहरुलाई चिर्दै अगाडी बढ्नु पर्छ । गत वर्ष नेपालामा उद्योग १० प्रतिशतले वढेका छन् । कृषिमा […]
रवीन्द्र भट्टराईले भने सेयरबाट करोडपति बन्ने सूत्र
सेयरबाट करोडपति बन्न सबैभन्दा पहिले सेयरसम्बन्धी शिक्षा लिन आवश्यक छ । सेयरबाट हुने फाइदा, जोखिम, कम्पनी छनौट गर्ने तरिका, मूल्य तलमाथि हुने आधार तथा बजारमा आउने समग्र सूचना र समाचारलाई पढ्न अनि बुझ्न सक्नुपर्छ । दोस्रो, लगानीको उद्देश्य स्पष्ट हुुनुपर्छ । कति समयका लागि, कति पैसा, किन र कस्तो कम्पनीमा लगानी गर्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट […]
नेपालले इजरायलबाट सिक्नुपर्ने कुरा भनेको परिश्रम हो : राजदूत थापा
इजरायलका लागि नेपालका राजदूत : महामहिम निरन्जन थापा सबैभन्दा पहिले । एउटा मरभूमिलाई मानिसहरूको कडा मेहेनतले नै इजरायललाई हराबरा बनाए । जम्मा ८० लाख जनसङ्ख्या भएको सानो देश जसको चारैतिर शत्रु नै शत्रु छन् तर पनि उनीहरू सुरक्षित भएर बस्न सक्ने लगनशील र पौरखी भएको देश हो । हाम्रो नेपाल त्यसै पनि सुन्दर र प्रकृतिले […]
संघीयताका नाममा कर बढाए, ओलीले किन रोकेनन् ? त्यत्रो जेल बसेको मान्छेले : सीपी मैनाली
मान्छेले गल्ती गर्छ र सुधार्न पनि सक्छ । तर, अहिलेसम्म यिनीहरुको घोषणापत्र हेरुञ्जेल यिनीहरुले गल्ती सच्याउने छाँट देखिँदैन । उनीहरुको दस्तावेजमा लेखेकै कुराहरुको मनसाय हेर्दाखेरि उनीहरु राष्ट्रघाती बाटोमा जाने नै देखिन्छ । यिनीहरुले संघीयताका नाममा किन काहिँ सय प्रतिशत, त काहीँ पाँचसय प्रतिशत कर बढाए ? यसलाई केपी ओलीले किन नरोकेको ? त्यत्रो जेल बसेको […]
मेरो राजीनामालाई दबाब मान्दिनँ, सल्लाह मान्छु : निर्वतमान कानुनमन्त्री तामाङ
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले मंगलबार पदबाट राजीनामा दिए । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले बङ्गलादेशमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीका सम्बन्धमा आफूले दिएको अभिव्यक्ति विवादित भएकाले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष राजीनामा दिएको बताएका थिए । बल्ल मन्त्री पद पाउनुभएको थियो त्यो पनि गयो । अब फेरी […]
राजेन्द्र महतो : राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य स्थानीय तहले कर लगाउने तरिका ठीक भएन । जथाभावी लगाएर अधारको दुरुपयोग भएको छ । सघीयताकै विरोध हुन थालेको छ । त्यसकारण स्थानीय तहले कर जजभावी लगाउनबाट रोक्न दुईवटा काम गर्नुपर्छ । पहिलो, प्रधानमन्त्रीले तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाउने र छलफल गर्ने । छलफलपछि कर जथाभावी लगउन रोक लगाउने । […]